Dhinda Regedza Optimization
Maitiro Ekukwiridzira Dhinda Rezinesi Rekutsvaga
Chipiri, April 5, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tinoshanda nezvimwe zvinoshamisa hukama hwevanhu mafemu isu pamwe nevatengi vedu. Hukama hweveruzhinji ichiri mari hombe - vedu vanhu kuDittoe PR vakatitorera kutaura mu New York Times, Mashable uye mamwe masosi akakurumbira.
Nepo nyanzvi dzePR dzichinzwisisa kunyora zvinomanikidza kuburitswa kwemapepanhau nekuaita kuti agoverwe kune vateereri chaivo, dzimwe nguva haakwidziridze kuburitswa kwenhepfenyuro pamwe nezvavaigona kutsvaga.
Gara uine chokwadi chekuti yako Press Regedza traffic inogona kuyerwa. Tinowedzera mushandirapamwe wekutevera uye akasarudzika mapeji ekumhara kune edu Press Releases kuti tikwanise kuona kuti traffic irikubva nekukosha kwakadii.
Shandisa akakosha mazwi akakosha mumusoro Yako Press Kuburitswa - iyo inowanzo shandiswa mumazita emapeji emasaiti ekuenda ayo akabatanidzwa.
chipfuro 1 kusvika ku3 akakosha mazwi akakosha emitsara mukati memuviri wekuburitswa kwenhau uye uve nechokwadi chekuti wadzokorora. Kuvashandisa mumisoro midiki kana kuifomatiita zvakashinga kana iticiki kunobatsira nguva dzose, futi!
sanganisira zvinongedzo kudzokera kune yako saiti kana peji rekumhara mukati mekuburitswa kwenhau uye uve nechokwadi chekubatanidza iro kiyi kana mutsara, kwete zita rekambani yako. Kana iwe usingakwanise kuwedzera chinongedzo, ita shuwa kuti chinongedzo chinowanikwa padhuze nekiyi kiyi mutsara.
Shandisa mifananidzo mukati memamiriro ekuburitswa kwako. Taura iyo faira uchishandisa rakakosha (dashes yenzvimbo) uye, kana iwe uchikwanisa kuiisa neimwe nzira zvinyorwa kana zita - shandisa kiyi.
Shandisa mari yacho. Ini ndakaburitsa zvinoburitswa kare ndisina kubhadhara kuti zviparadzwe uye hazvina kuguma nezevezeve rimwe chete… kubhadhara kugoverwa kuburikidza MarketWire, PRWeb, DhindaKing kana mamwe masevhisi anogona kuwedzera mukana wekutorwa kwenhau dzako kunzvimbo dzenhau dzine masimba makuru.
Kugadziridza kuburitswa kwemapepanhau kunogona kupa kumwe kusimudzira kune yako webhusaiti webhusaiti kana iro rekuburitsa rinogoverwa uye kubatanidzwa kuburikidza nemamwe maindasitiri akakodzera kana nzvimbo dzenhau. Usarasikirwa nemukana wekugadzira yakakosha backlinks kudzokera kune yako saiti, kutyaira kumusoro chinzvimbo chako uye kuwedzera masimba esiti yako neinjini dzekutsvaga.
Tags: dittoeprmarketwireprpr kugoveramupepanhaumuchina wekuburitsamuchina wekuburitsa kunyorakutsikiriraprweb
Ndezvipi Zvakakosha Nezve Social Media?
Gumiguru 11, 2011 pa 10:42 AM
Gumiguru 12, 2011 na7: 18 PM